Qoorqoor oo lagu hareereeyay Gaalkacyo | KEYDMEDIA ENGLISH
Qoorqoor oo lagu hareereeyay Gaalkacyo
Muranka ka dhashay boobka Qoorqoor la doonayo kursigaan, wuxuu gadaal u sii dhigay, waqtigii la qorsheeyay in la qabto doorashada Saddexda kursi ee HOP095, HOP038 HOP069.
Gaalkacyo, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay uu socday, abaabul ciidan oo ay sameynayaan beelaha leh, kursiga, HOP095, oo muran xooggan ka taagan yahay habraaca loo marayo doorashadiisa.
Sida ay Keydmedia Online, u xaqiijiyeen, dad kala duwan oo ku sugan koofurta Gaalkacyo, ciidamadii ugu badnaa iyo gaadiid dagaal ayaa lagu arkayaa, agagaarka madaxtooyada Galmudug ee Gaalkacyo, halkaasoo uu ku sugan yahay Madaxweyne Qoorqoor.
Muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada, ayaa sidoo kale, muujinaya, ciidamo xooggan oo ku sugan afaafka hore ee Madaxtooyada, kuwaas oo si cad u sheegay in uusan Qoorqoor ka bixi karin halka uu ku jiro.
Ciidamadaan ayaa diiddan, qorshaha, Axmed Qoorqoor ku doonayo inuu kursiga, HOP095, u boobo, shaqsiyaad uu Farmaajo soo dirsaday iyo inuu ku tunto qeybta beelaha uu ka dhaxeeyo kursiga.
HOP095, ayaa sabab u noqday, in Guddiga Hirgelinta Doorashada Galmudug, uu muddo hal maalin ah dib u dhigo, shaacinta Guddiga Xulista ergada, saddex kursi oo maanta la filayay in la shaacoiyo.
Sidoo kale, muranka ka dhashay boobka Qoorqoor la doonayo kursigaan, wuxuu gadaal u sii dhigay, waqtigii la qorsheeyay in la qabto doorashada Saddexda kursi ee HOP095, HOP038 HOP069.
Qoorqoor, ayaa hore u boobay kuraas badan, hayeeshee, sida muuqata wuxuu ku fashilmi karaa, inuu HOP095, u dhaco Cabdikariin Dhalac, oo Farmaajo ku daaban.
Qoorqoor, wuxuu hore ugu fashilmay, inuu boobo, kursiga HOP060, kaas oo Qaali Cali Shire, kaga adkaatay Ubax Tahliil, oo shanti sano ee la soo dhaafay, ka mid ahayd adeegayasha Farmaajo.